DAAWO: 30 sano kaddib, bixitaankii Jaalle Siyaad Barre, & digniintii uu xilligaas jeediyay – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
January 26, 2022 Xuseen 5
30 sano, ayaa maanta kasoo wareegtay markii Madxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre, uu isaga baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Jabhaddii USC ayaa la wareegay Muqdisho.
Maalmo kaddib, bixitaanka Madaxweyne Siyaad Barre, ayaa waxaa Madaxweyne KMG ah loogu dhaariyay Muqdisho, Cali Mahdi Maxamed, balse jabhadihii kale ee dalka ka dagaalamayay ayaa ku gacan seyray.
Halkaan hoose ka Daawo Khudbadii ugu dambeeysay ee Jaalle Maxamed Siyaad Barre, uu ka jeediyay Radio Muqdisho.
Ragu waa raggii hore hadalna waa intuu yiri.Waxaa bedelay kuwa aan qab iyo hami lahayn oo iska ciyaal xaafad ah.
Taasaa qiraysa in Mahamed Siad bare (AUN) ahaa halyey wadani ah.
Bal eega isagoo hareeryaha looga wareegsanaa ayuu wali u danqanayey dugaag uu u haystey in ay dad yihiin. Sodon sano kadhib wali dugaagnimadii faro kama qodna.
Waa in garoowe laga taago taalada Mahamed Siad Barre (Allah yaaa rxamu) .
Hadii reer Garoowe diidaan’na waxaan ka taagayaa tuuladii aan ku dhashay.
M.S.Barre waxuu ahaa halyey wadani ah laakiin waxaa ka hoos shaqeynayey oo xilalka u hayey dugaagaan sodonka sano naga dhigay qaxootiga.
Madaxweynihii Dowladdii Kacaanka aheyd ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre Allaha u naxariisto Janatul Fardowsa Allaha ka Waraabiyo.
Waddani buu ahaa aad u Garasho sarreeya.
Wax badan buu dadka iyo Dalka Soomaaliya u qabtey mana ahan wax aan hadda doonayo inaan halkaan ku xuso waayo ma ahan wax ku filan.
Dowladdii Kacaanka aheyd waxaay aheyd Dowladdii ka sameysey Soomaaliya Nadaamk Dowladnimo Casri ah,marka dhinac kasta laga eego.
Waxaa nasiib darro weyn ah in dadka Soomaaliyeed weli u dhiiran yihiin iney Dhiigga Shacabka sidii Biyaha u daadiyaan,kuna dhiiriran yihiin. Qabyaaladdana u tahay wax ay Caabudaan si ka xoog badan Diinta.
Welina iney taagan tahay jeclaanta gacma hoorsiga,30 ka dib iney jiraan Shaqsiyaad kooban oo Qabyaalad ku no ah oo diidan Dowladnimada, sharciga iyo kala dambeynta in waddanka laga dhaqan geliyo, in Nadaamka Dowladnimada waddanka oo dhan si siman uga hirgalo, lagana baxo kala qoqobnaanta,iyo hab dhaqannada u muuqaalka eg sidii Dowlado gaar ah,kuna xiran si gaar ah waddamo kale.
Sheeko Faqash iyo cataw iga dheh. Markii laga adkaaday bay xusuustaan Alle ka cabsi iyo waddaninimo.
Awal maxaa towbada iyo diinta iyo aakhirada xusuustooda idiin diiday?
Maxaad u diideen markii la idin lahaa Alle xusuusta oo ka yaaba?
Calaacal Faqash cidi u joojin meyso. Calaacalka Waa caado ay leeyihiin markii la ceejiyo.
Siyaad Barre waa ninkii ku dagaalamay caasimaddi uu qeynteeda dhisay oo ilaa tabari badayna dirirayay ka dibna isaga cararay dibna ugu laabtay deegaankii la yiri wuu ku dhashay, kuma ekaan intaa ee waxa uu isku dayay in uu dowladnimadii dib ugu soo laabto asaga oo markan wata QOYSKIISII. cEEBEY TACAAL aqyaan maqli jiray xadka ayuu orod kaga talaabay waana tii uu NIGERIA ku dhintay. Taarikkhdiisu waxii uu bi’iyay iyo waxii wanaag ahaaba waa ay qoran yihiin. foolxumuuse ku dhintay.